ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးချ တွင် ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, shippတွင်g, စက္ကူ makတွင်g, စွမ်းအား အပင်များ, heatတွင်g, buildတွင်g အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု နှင့် အခြား တွင်dustries.AOX's တွင်novative ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ အယူအဆ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းs တွင် လက်တွေ့ကျတဲ့ လျှောက်လွှာများ ရှိ လက်ခံရရှိ အလွန် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု။ AOX-M စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator များမှာ စိတ်ချရသော, လုံခွုံသော နှင့် အဆင်ပြေ, နှင့် အဆိုပါ အားသာချက်များ ၏ compatibility နှင့် အလေ့အကျင့်။
အထူးဒီဇိုင်းမြင့်မားစတင် torque မော်တာ, မကြာခဏအပြည့်အဝတံခါးပိတ်အနေအထားကနေအဆို့ရှင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သုံးအဆင့် AC အမော်တာများအပြင်, Single-အဆင့် AC အကိုလည်းပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ် AOX-M စီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
မာလ်တီအလှည့် actuator စက်တပ် AOX-M စီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းဘို့ 2. မော်တော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
3. အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အနေအထား display ကိုရှင်းလင်းစွာအဆို့ရှင်နှင့် actuator ရဲ့ status ကိုဖော်ပြသည်။
ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူ, AOX ၏ R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျနော်တို့ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ်ဒေသခံအဝေးထိန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-M စီးရီးဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-M စီးရီး၏အရည်အသွေးဒေသခံအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့ပေါင်းစုံအလှည့် actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Q: မဆိုအသိအမှတ်ပြုသွင်းကုန်၏မပါဘဲပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ်ဟာ AOX-M စီးရီးဒေသခံဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုအမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
Q: ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ် AOX-M စီးရီးဒေသခံဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ catalog ကြည့်ရမလား
ဖြေဟုတ်ကဲ့, E-mail ကိုမှတဆင့်သင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည် catalog ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်